Madasha Badbaado Qaran Oo Warqad Cabasho Ah U Dirtay Midowga Afrika – Great Banaadir
Madasha Badbaado Qaran ee Sooomaaliya ayaa Warqad Qoraal ah ay u direen Madaxa Shir Gudoonka Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika oo ah Safiirka Jabuuti u fadhiya Dalka Ethiopia Ambasadoor Maxamed Idris Farah kaa oo ay cabasho kaga yihiin Waqti Kordhinta loo sameeyay Hay’adaha Dowladda Soomaaliya.
Warqadaan ayaa loo diray Safaarada Jabuuti ee Ethiopia, waxaana Golaha Badbaada Qaran ee Somalia ay ku wargeliyeen Gudoomiyaha Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika sida ay uga walaacsan yihiin Xaalada hadda ay mareyso Soomaaliya, waxaana ay soo dhoweyeen Dadaalada Midowga Afrika uu ku bixinayo sidii Xal Arrimaha taagan looga gaari lahaa.
Qoraalka Golaha Badbaado Qaran ay u direen Ambasador Maxamed Idris Farah ayay ku sheegen in Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ay ka horyimaadaan Waqti Kordhinta Barlamaanka ay u sameeyeen Madaxweynaha Muddo Xileedkiisa Dhamaaday ee Farmaajo, ayna talaabo ka qaadan kuwii falkaasi ku kacay.
Qoraalkoodii sidoo kale waxaa ku jiray in ay wax waliba diyaar u yihiin oo Miiska Wada-hadalka lagu dhameenayo balse Siyaasada Soomaaliya uu isku kali yeelay Hal Qof oo ay ula jeedeen Madaxweynaha Muda Xileedkiisu Dhamaaday.
Madasha ayaa soo jeedisay in ay soo dhoweenayaan Wada-hadal waliba oo lagu gaarayo in lagu meel mariyo Heshiiska 17 September ayna kasoo horjeedaan in Wada-hadalada lagu soo lifaaqo Waqti Kordhinta Hay’addaha Dowladda loo sameeyay.
Dhinaca Garsoorka Soomaaliya ayay tilmaameen mid wali dib u dhis uu ku socdo; sidaa darteedna Midowga Afrika iyo Beesha Caalamka ay ka rajeenayaan in Soomaliya meelahaasi laga taagero.
Madasha Badbaado Qaran oo ay ku midoobeen Siyaasiyiinta Mucaaradka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa fariin u diray Golaha Ammaanka ee Qaraamida Midoobay laba maalmood kahor oo ay Arrimaha Waqti Kordhinta kaga ashtikoonayeen.
Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa Maanta shir ka yeelanaya Arrimaha Soomaaliya, iyadoo Midowga Afrika uu qaadan doono Door Hoggaamineed oo kusaabsan Xal u helida Xaalada cakiran ee Siyaasadeed.